E-azụmahịa na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe | ECommerce ozi ọma
Azụmahịa kọmputa Ọ bụ n'onwe ya mgbanwe na ụzọ anyị si ahụ ahịa, n'ihi nke a enwere ọtụtụ ajụjụ anyị ga-enyocha iji nwee ike igosi na nke a ụdị ahia ọ ka bụ ihe ọhụụ, na ihe akaebe bụ ụfọdụ ụdị azụmaahịa ụfọdụ ụlọ ọrụ ụfọdụ raara onwe ha nye teknụzụ tụlere, dịka DELL; na ihe nlereanya ya Ọ dị ezigbo ihe ịga nke ọma, n'ihi na ndị ahịa ya na-ekwu ya, ihe kpatara ịdị adị bụ na ụdị a dabere na afọ ojuju ndị ahịa zuru oke, anyị anaghịkwa ekwu na ngwaahịa ndị erere abụghị nke dị mma, ka anyị tụlee ajụjụ a.
Ihe mbụ ị ga-atụle bụ na ebumnuche nke a e-azụmahịa ụdị na-adabere kpam kpam na a nlebara anya nkeonwe n'ihi na onye ọ bụla ahịa, n'ihi ya, ọ bụ ike na-enye nri ngwaahịa maka kwuru ahịa dabere na ha mmasị, nke a kọwara na ozugbo dabere na dị iche iche e ji mara ha igodo n'ime anyị katalọgụ.
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi ihe ọ pụtara maka njikọ mbunye, ebe ọ bụ na ntọala bụ naanị imepụta ngwaahịa na ọnụọgụ nke onye ahịa chọrọ. Nke a na-eme ka usoro dum nke ihe okike a na-rụrụ na-enweghị ihe dị ka inventories; Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ, n'ihi na ọ na-eme ka lọjistik dị ukwuu maka nnyefe nke ngwaahịa na oge.
Ihe nlereanya a na-eje ozi otu n'ime ahịa choro na anyị nwere ike ịkọwa ya na nkebi ahịrịokwu a ma ama, “ihe onye ahịa ya rịọrọ”; Eziokwu ahụ bụ na n'eziokwu, olee uru inwe ngwaahịa ma ọ bụrụ na enweghị onye ọ bụla insured iji nweta ya? Ihe nlere a abughi nani azịza ajuju a, kamakwa o choro ihe ndi ozo choro nke ulo oru dika ibelata ego mkpofu nke enwetara n'ihi ngwaahịa ndi ereghi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » E-azụmahịa na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe
Ezigbo ozi ọma maka e-commerce dị na mpaghara